Cali dheere ?dalalka ku jira howl-galka AMISOM ayaan ka fulin doonaa weeraradii Nairobi oo kale? – Radio Daljir
Seteembar 24, 2013 3:23 b 0
Baardheere, September 24, 2013 – Kooxda Al-shabaab ayaa ka hadlay mar kale weerarkii dhismaha Westgate shopping mall ee Nairobi, halkaas in ka badan 60 saacadood ay gacanta ku hayeen xubno ka tirsan ururka Al-shabaab ee Soomaaliya, iyadoo ay dhinteen 69 ruux.
Afhayeenka Al-shabaab Cali dheere oo la hadlay warbaahinta ururka waxaa uu sheegay in weeraro culus oo kale ay ka fulin doonaan dalalka gobolka, gaar ahaan dalalka ay ciidamadu ka joogaan Soomaaliya ee ka mid ah howl-galka AMISOM.
Sheikh Cali dheere waxaa uu si cad u bayaamiyey in ay diyaariyeen qorshe ka dhanka ah dalalkaas, isagoo ka hadlayey arrinta weerarkii Westgate ayuu tilmaamay in ay weeraro la mid ah kaas iyo kuwa ka waa weyn ay ka fulin doonaan dalal dhowr ah.
Al-shabaab si khaas ah uma aysan magcaabin dalalka ay ka fulin doonaan weerarada, balse waxaa la og yahay in ay ciidamo ka joogaan Soomaaliya dalalka Kenya, Ethiopia, Brandi, Uganda iyo Sierra Leone, kuwaas oo muruq weyn ku leh AMISOM.
Baahin: Isniin, 23 Sep 2013, Caawa Iyo Daljir Weriye Macamed C Cali (Kooshin) ~ Daljir ~ Boosaaso